16 Yemahara Mitambo uye Kunyorera Kweanokurumidza (Ndira 25) | IPhone nhau
Pakati pevhiki rebasa, isu tichaenda kuzvipa mufaro mutsva neiyi sarudzo yemitambo uye zvemahara application iyo iwe yaunogona kuwana izvozvi muApp Store kune yako iPhone, iPad uye iPod Kubata zvishandiso. Semazuva ese, isu tichawana mashandiro nemitambo yedzinenge mhando dzese uye nezvese zvido, kuitira kuti iwe ugowana chokwadi icho app icho chinoita izvo zvawaida, kana iwo mutambo uyo unokuvaraidza iwe paunenge uchifamba nebhazi kana metro kana paunenge wakamirira mumutsetse usingagumi kubhangi.
Asi izvo zvausingakwanise kurasikirwa nazvo ndezvekuti ese anotevera kukwidziridzwa atinokuunzira nhasi muActualidad iPhone ari Nguva Yakatemwa. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuve wakangwarira kwazvo kurodha maapplication nemitambo. Rangarira: "kurodha pasi izvozvi, funga gare gare." Iwo mashandiro emahara saka, kana iwe usingaade iwo, kana asiri iwo zvawaitarisira, ingoadzima kubva pane chako kifaa, uye voila!
1 Usarega iyi yemahara mitambo uye kunyorera kupunyuka
1.1 Rune Anokosha
1.2 Rune Anokosha - Deluxe
1.3 Tiggly Nhau Mugadziri: Gadzira Mazwi uye Rekodha Yako Yako Ngano
1.4 Tiggly chiremba
1.5 Surge Partner - Ongororo yekutevera yeUber
1.6 PopMusic - Isingagumi Ad Yemahara Music Kune SoundCloud
1.7 Mamiriro ekunze FX Pro - Instant Mvura, Zuva, Muraraungu, Gore, Chando, Nyeredzi ne PhotoJus
1.8 BoomBox - Ad Yemahara Music Player yeiyo SoundCloud
1.9 ezPDF Mukombe - PDF Clip uye Chidimbu
1.10 Mhemberero paSarayi
1.11 Zivo Taps
1.12 ezPDF Reader: PDF Reader, Annotator & Fomu Yekuzadza
1.13 ezPDF Reader: PDF Reader, Annotator & Fomu - iPad
1.14 ezPDF CLEAR: Dhijitari Yemabhuku & Bhuku rebasa
1.15 Chirungu cheZuva Nezuva Zviitiko
1.16 Iyo Chirungu Yaunoda Yeye Hofisi
Usarega iyi yemahara mitambo uye kunyorera kupunyuka
Rune Anokosha Iyo ine yakajairwa mutengo we1,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Rune Anokosha Deluxe Iyo ine yakajairwa mutengo we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Rune Anokosha - Deluxevakasununguka
Tiggly Nhau Mugadziri: Gadzira Mazwi uye Rekodha Yako Yako Ngano
Tiggly Nhau Mugadziri Iyo ine yakajairwa mutengo we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Tiggly Nhau Mugadziri: Gadzira Mazwi uye Rekodha Yako Yako Nganovakasununguka
Tiggly chiremba Iyo ine yakajairwa mutengo we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Surge Partner - Ongororo yekutevera yeUber
Surge Partner - Ongororo yekutevera yeUber Iyo ine yakajairwa mutengo we0,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
PopMusic - Isingagumi Ad Yemahara Music Kune SoundCloud
PopMusic - Isingagumi Ad Yemahara Music Kune SoundCloud Iyo ine yakajairwa mutengo we6,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Mamiriro ekunze FX Pro - Instant Mvura, Zuva, Muraraungu, Gore, Chando, Nyeredzi ne PhotoJus
Mamiriro ekunze FX Pro Iyo ine yakajairwa mutengo we1,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Mamiriro ekunze FX Pro3,49 €
BoomBox - Ad Yemahara Music Player yeiyo SoundCloud
BoomBox - Ad Yemahara Music Player yeiyo SoundCloud Iyo ine yakajairwa mutengo we5,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
ezPDF Mukombe - PDF Clip uye Chidimbu
ezPDF Mukombe - PDF Clip uye Chidimbu Iyo ine yakajairwa mutengo we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Mhemberero paSarayi Iyo ine yakajairwa mutengo we9,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Zivo Taps Iyo ine yakajairwa mutengo we1,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
ezPDF Reader: PDF Reader, Annotator & Fomu Yekuzadza
ezPDF Reader Iyo ine yakajairwa mutengo we1,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
ezPDF Reader: PDF Reader, Annotator & Fomu Yekuzadza2,29 €
ezPDF Reader: PDF Reader, Annotator & Fomu - iPad
ezPDF Reader yeIpad Iyo ine yakajairwa mutengo we3,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
ezPDF Reader4,49 €
ezPDF CLEAR: Dhijitari Yemabhuku & Bhuku rebasa
ezPDF Yakajeka Iyo ine yakajairwa mutengo we9,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
ezPDF CLEAR: Dhijitari Yemabhuku & Bhuku rebasavakasununguka
Chirungu cheZuva Nezuva Zviitiko
Chirungu cheZuva Nezuva Zviitiko Iyo ine yakajairwa mutengo we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Chirungu cheZuva Nezuva Zviitiko3,49 €
Iyo Chirungu Yaunoda Yeye Hofisi
Iyo Chirungu Yaunoda Yeye Hofisi Iyo ine yakajairwa mutengo we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Yambiro: Ndinoyeuka kuti chinhu chega chatinogona kuvimbisa ndechekuti izvi zvinopihwa uye kukwidziridzwa zvinoshanda panguva yatinoburitsa ichi posvo; Izvo zvinopihwa kwenguva yakatarwa uye hatigone kuvimbisa kuti zvichave zvinoshanda kwenguva yakareba, uye hatizive kana zvichizopera sezvo vavaki havawanzo kutaurirana nazvo. Naizvozvo, tora mukana uye kana iwe uchifarira chero eaya mafomu kana emahara mitambo, uwane nekukurumidza chisungo chisati chapera. Uye kana ukasasvika nenguva, usazvidya moyo. Zvimwe mangwana!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 16 Yemahara Mitambo uye Kunyorera kweanokurumidza (Ndira 25)
Zvirongwa zvisina kuchena uye mitambo zvese!
Zvingave zvakanaka kuzivisa kuti kunyorera kuri kuenda. Isa kuisa….
Webhusaiti yeApple inotanga kutora font yeSan Francisco